Zvimwe Kupfuura Safaris Yemusango, Izvozvi Zvave Kuratidzwa kweGorofu muEast Africa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Zvimwe Kupfuura Safaris Yemusango, Izvozvi Zvave Kuratidzwa kweGorofu muEast Africa
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Sports • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Dr. Numbaro naVa Najib Balala paEast Africa Gorofu Tourism
Kwete safaris yemusango chete muEast Africa, ikozvino kushanya kwemitambo kuri kuuya kuzosimudzira mafaro ezororo munzvimbo iyi kukwezva vashanyi vemitambo kuti vawedzere mapakeji avo ekufambisa kubva kumhuka dzesango kuenda kumitambo iri kunze kwenzvimbo dzekuchengetedza.
Gorofu Tourism ichangotangwa senzira yemitambo yekushanyirwa kwenzvimbo kukwezva vafambi venhabvu vane tarisiro yemitambo.
Gurukota reTanzania reKushanya uye Munyori weKenya weKushanya vakasangana muDhorobha reTanzania reVashanyi kuTanzania kuti vasiye chirongwa cheGoridhe Tourism muEast Africa.
Mapakeji akakosha ezvekushanya kwemitambo achazogadzirirwa kuti akodzere vatambi venyika dzegorofu vanoshanyira Tanzania.
Tanzania neKenya, mbiri dzinotungamira safari safari kuEast Africa, vachangoparura Golf Tourism semitambo yemitambo yekushanya kumatunhu iyo yakagadzirirwa kukwezva marudzi matsva evatambi vekutandarira vanotambira mitambo kubva kuEast African Community (EAC) matunhu nenzvimbo dzepasi. .
Makurukota ezvekushanya kubva kumatunhu maviri aya akabvumirana kuunza nekusimudzira Goridhe Tourism pakati penyika mbiri, nechinangwa chekukwezva vashanyi vemitambo kuti vapedze mazuva avo mudunhu iri.
Gorofu Tourism inogona zvakare kukwezva vepasi rose gorufu kuti vashanyire dunhu vobva vapedza mazuva avo vachienda kunzvimbo dzakakosha dzegorofu muNorth Tanzania neKenya.
Najib Balala achidhonza bhora
Gurukota rezveKushanya muTanzania, Dr.Damas Ndumbaro, pamwe nemunyori weKenya weKushanya, VaNajib Balala, vakasangana muguta rekumusoro reTanzania kuArusha kuti vasiye chirongwa cheGolf Tourism muEast Africa.
Ikozvino, Yekushanya kweGorofu munguva pfupi ichave imwe yekukwezva kana chigadzirwa chevashanyi kukwezva vashanyi vematunhu nevekunze, avo vanozobatanidza mafambiro avo ekushanya kubva kumusango safaris nemazororo emahombekombe kusvika kugorufu teeing.
Mapakeji akakosha ezvekushanya kwemitambo achazogadzirirwa kuti akodzere vatambi venyika dzegorofu vanoshanyira Tanzania. Mutungamiri weTanzania Golf Union (TGU), Chris Martin, aive nechivimbo uye akati Tanzania inofanirwa kutanga makosi egorofu kukwezva vatambi venyika pamwe nevashanyi.
Vatambi gorofu vanosvika zana nemakumi mana vanobva kunyika gumi nenhatu dzinosanganisira United States, Australia, Canada, Belgium, Netherlands, England, China, Kenya, India, Zimbabwe, South Africa, Uganda, uye nyika dzeTanzania dzakasiya mutambo weKutanga weKili “Kili Golf”.
Mitambo Yekushanya yanga isiri chikamu chekushanya kwekushanya muTanzania, uye kuvhurwa kweGoridhe Tourism kunokwezva mari yakawanda apo vashanyi vaizowedzera mazuva ekugara muTanzania kunakidzwa nekutamba gorofu.
Gorofu ndeimwe yemitambo inokwezva huwandu hwakakura hwevashanyi uye yanga ichigadzira inodarika mabhiriyoni makumi maviri emadhora pagore pasirese.
Kubva panguva iyi kuti Tanzania yasarudza kutanga kushambadzira kwekushanya kuburikidza nemitambo yegorofu.
Arusha guta inzvimbo yekutanga yevashanyi yakaboorwa mumapaki eNorthern Safari eTarangire, Lake Manyara, Ngorongoro, uye Serengeti.
Vachitarisa kushambadza dunhu reEast Africa senzvimbo imwe chete yekushanya, makurukota ezvekushanyirwa uye vakuru vedunhu veprotocol kubva kumatunhu matanhatu vakabvumirana kutanga EAC Regional Tourism Expo yegore negore nechinangwa chekuvandudza kuoneka kwenzvimbo iyi nekutengesa. iyo senge imwe nzvimbo yekushanya.
Nyika dzeEast Africa dzichaita chiratidziro chikuru chekushanya kupera kwevhiki kuri kuuya muArusha, iro guta re safari ku Northern Tanzania. Iyo yekutanga uye huru yekuratidzira kuratidzwa kunoitika muEast Africa.
Chiratidziro chakwezva vatori vechikamu kubva kunhengo dzenyika dzeTanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, neSouth Sudan kuzoratidzira zvivakwa zvavo zvekushanya pasi pemuraira wekubatanidzwa kwematunhu mukushanya.
Tanzania neKenya vakatsigira mafambiro emahara ekushanya kwenzvimbo uye epasirese mushure mekunge mapurezidhendi kubva kumatunhu maviri akavakidzana abvumirana kusimudzira mafambiro enharaunda nekufamba kwevanhu.
The African Tourism Bhodhi (ATB) parizvino iri kushanda padhuze nenzvimbo dzinoverengeka dzemu Africa kusimudzira nzendo dzepakati pe Africa kuburikidza nemapuratifomu enharaunda ekushanya
Iyo East Africa bloc ikozvino yakamira semuenzaniso wakanaka wekusimudzirwa kwekushanya kwenzvimbo pasi pechikuva chimwe icho African Tourism Board iri kurwirawo budiriro kudunhu rose.
Federal mutongi anomisa United Airlines COVID-19 jekiseni ...
Mumwe muvashanu veBrits akazvidza zano pamusoro pekufamba kune dzimwe nyika
Ndege Itsva San Jose kuenda kuPalm Springs
Latin America Airbnb Nyowani Top 12 Favorites
Inonakidza Bhizinesi Kuitika kuIMEX America
Dr. Taleb Rifai Kusheedzera Nechimbichimbi kunyika dziri nhengo dzeUNWTO...
Kutaura Nekukoshera Munyika Itsva Yekufamba
Vashanyi vasina booster shots vanogona kupinda muIsrael chete ...
St. Kitts & Nevis vanobvumidza Antigen bvunzo ye ...
Nhume dzemuMadrid dzakakokwa kuUNWTO Chiokomuhomwe...
Emirates Inovandudza Kuzvipira Kwayo kuSeychelles kuExpo...
New UK Tourism Restrictions? WTTC inoridza mabhero
Kuedza Kudzoreredza Kwekushanyirwa Kunowana Kuwedzerwa Kukuru Kubva Kudzoka kwe...
Kirk Ziehm akagadza CEO mutsva weBuoutout
Farewell Le Professionnel: Iconic French nyeredzi Jean ...
Swoop: Ndege kubva kuWinnipeg kuenda kuPuerto Vallarta...
Kigali to Doha indege ndetse no Qatar Airways ...
Hawaii Tourism: Mari yekushanyira vashanyi yakadzika mukati Aloha mamiriro
Hupenyu Hutsva hweBluefields Westmoreland Jamaica
Denmark inogumisa zvese COVID-19 zvirambidzo mushure memazuva makumi mashanu nemakumi mana nemasere ...
Ko Hurumende yeSt. Kitts & Nevis rava ...
Mushonga mutsva wegomarara weZantrene unodzivirira moyo kubva murufu
Chii Chitsva muBahamas munaNovember
National Geographic Dzidzo: Banking kuEjipitori
Mazano Akanakisisa Ekuita Kuti Kune Rwendo Rwakachengeteka uye Runofara
Seychelles Inopenya pa28th World Travel Awards
Makore mashanu mujeri reGerman nekuda kwekunyepedzera COVID-19 ...
Amazon inovimbisa zvibvumirano zvikuru panguva yeCyber ​​​​Muvhuro vhiki
Holland America Line Inotangisa Mwaka neCruise ku...